साझाको सरकारलाई चेतावनी:कसले रोक्दो रहेछ, हेरौँ! – tshorolpa
Home/मुख्य समाचार/साझाको सरकारलाई चेतावनी:कसले रोक्दो रहेछ, हेरौँ!
साझाको सरकारलाई चेतावनी:कसले रोक्दो रहेछ, हेरौँ!
News १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार १५:४०
राजधानीको खुलामञ्चमा कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका मजदूर तथा असहायहरुलाई खाना खुवाउने कार्यमा रोक लगाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयको साझा पार्टीले भर्त्सना गरेको छ।
साझा पार्टीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरको उक्त निर्णय अमानवीय भएको बताएको छ।
‘कोरोना संक्रमणका कारण श्रमिक तथा असहायहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएका बेला सरकार स्वयंले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर उनीहरूको हेरचाह गर्नु पर्दथ्यो। तर उल्टो नागरिक स्तरबाट भइरहेको परोपकारी कार्य समेत रोक्न निर्देशन दिनु अमानवीयताको पराकाष्ठा हो,’ साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साझा पार्टीले निकालेको बिज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै :_
प्रेस विज्ञप्ति: कसले रोक्दो रहेछ, हेरौँ!
कञ्चनपुरमा ३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्युु
१८ बैशाख २०७८, शनिबार ११:१६
इजिप्टमा रेल दुर्घटना ३२ जनाको ज्यान गयो, सयौँ घाइते
१४ चैत्र २०७७, शनिबार १३:३७